Warar - Dhex-dhexaad ah Cayayaanka
Sunta cayayaanka waa dariiq muhiim u ah wax soo saarka wax soo saarka beeraha, kaasoo door aad u muhiim ah ka ciyaara xakameynta cudurada, cayayaanka iyo haramaha, dejinta iyo hagaajinta wax soo saarka dalaga.
In kasta oo ay saameeyeen qiimaha wax soo saarka beeraha, aagga wax lagu beero, cimilada, agabka iyo waxyaabo kale, iibinta sunta cayayaanka waxay soo bandhigi doontaa isbeddello wareeg ah sannad illaa sannadka, laakiin dalabku wali wuu adag yahay.
Sida laga soo xigtay xogta Xafiiska Qaranka ee Tirakoobka, soo saarista sunta cayayaanka ee dalka oo dhan waxay muujisay hoos u dhac ku yimid tan iyo 2017.
Sanadkii 2017, soo saarista sunta cayayaanka ayaa hoos ugu dhacday 2.941 milyan oo tan, laakiin 2018 waxay ku dhacday 2.083 milyan oo tan. Sannadkii 2019, soo saarista sunta cayayaanka ayaa joojisay inay dhacdo oo waxay u kacday 2.2539 milyan oo tan, ilaa 1.4 boqolkiiba sanadkii.
Sanadihii la soo dhaafay, dakhliga iibka warshadaha cayayaanka ee Shiinaha guud ahaan wuxuu ilaaliyay isbeddel sii kordhaya.
In 2018, mahadsanid horumarinta sunta cayayaanka iyo kororka qiimaha wax soo saarka, iyo sidoo kale ballaarinta baahida loo qabo sunta cayayaanka ee dalagyada lacagta sida suuf iyo kaabayaasha, dakhliga iibka warshadaha ahaa qiyaastii 329 bilyan yuan.
Waxaa lagu qiyaasaa in cabirka suuqyada Shiinaha ee beeraha wali la filayo inuu sare u kaco sanadka 2020.
Sunta cayayaanka ee kaladuwan waxay ubaahantahay dhexdhexaadin kaladuwan habka wax soo saarka.
Badeecad ay soo saartay iyadoo lagu farsameynayo alaabta ceyriinka beeraha sidoo kale waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo isku daraya laba ama in ka badan oo walxo ah.
Dawooyinka sunta lagu buufiyo waxaa loo fahmi karaa inay yihiin wadaage, sidoo kale loo yaqaan 'intermediates intermediates'.
Asal ahaan waxaa loola jeedaa isticmaalka daamurka dhuxusha ama wax soo saarka batroolka sida alaabta ceeriin ee isku dhafka dhir udgoon, midabbada, maadooyinka, daroogooyinka, bacrimiyeyaasha, xawaaraha caagga iyo alaabada kale ee kiimikada ah, oo lagu soo saaray geeddi-socodka alaabooyinka dhexe.
Isku-darka dhexdhexaadinta ayaa guud ahaan lagu sameeyaa ficil-celinta, dhexdhexaadiyeyaasha la soo saarayna waa la kala saaraa oo la sifeeyaa, sida caadiga ah tikniyoolajiyadda soo-saarista.
Dhexdhexaadinta sunta cayayaanka iyo soosaarida chloroform waa hawlgal shirkad kiimiko wadaag ah, habka hawlgal dhaqameedka guud ahaan wuxuu qaataa tiirka muxaadarooyinka, howsha noocan ah waa mid adag, waxsoosaarka soosaarida oo hooseeya, isticmaalka korontadu waa weyn yahay, sidaa darteedna sii xoojinta kala qeybsanaanta bulshada ee shaqada iyo horumarka tiknoolajiyada wax soo saarka, shirkadaha badankood waxay bilaabaan inay casriyeeyaan tikniyoolajiyadda, waxayna doortaan hawlgal wax ku ool ah oo wax ku ool ah.